Burcad badeed Somali ah oo diiday inay siidaayaan markab ay madax furasho ka qaateen oo la laayey. – Radio Daljir
Jakarta, May, 04 – Wasaaradda gaashaandhiga ee Indonesia ayaa xalay sheegtay in ay ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee dalkaasi ay dileen 4 ka mid ah budhcad badeed Soomaali ah oo haystay markab lagu magacaabo MV Sinar Kudus, kaas oo ay ciidamadu sheegeen in lacag madaxfurasho ah oo laga siiyay budhcad badeedkii haytay balse 4-ta la dilay ay ka madax adaygeen sii daynta markabkaas, kaddib markii sida la sheegey in ka badan 30 ka mid ah budhcaddaasi ay ka dhaadheceen markabkaasi.
Gaashaandhigga Indonesia ma aanay sheegin halka lagu bixiyay madax furashada, waxase markabkan ay budhcad badeedku ka soo afduubeen biyaha gacanka cadmeed, marinkaas oo dhaqdhaaqa budhcad badeedku uu ku badanyahay.
Labaatan ka mid ah shaqaalaha markabkaas ayaanay khasaare ka soo gaadhin hawlgalka lagu laayay qaar ka mid ah budhcad badeedkaasi Soomaalida ah. Qiyaas inta u dhaxaysa 3 illaa 4 malyan oo doollar ayaa la sheegey in kooxda budhcad badeedka ah baad loo siiyay.
Budhcad badeedka ayaa inta badan la kulma dilal iyo ciqaabo kala duwan, waxana sidoo kale ay dhibaato ku hayaan safarrada u kala goosha adduunka ee mara biyaha gacanka cadmeed iyo kuwa badweynta India.